अाजकाे कार्यक्रमका पाहुना हुनुहुन्छ महावीर पुन ।
''अहिले देखिएको वाम एकताको प्रयासलाई नेपाली काँग्रेसले‍ कसरी लिएको छ ?'' हामी कार्यक्रम 'नेपाल चौतारी'मा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवडासँग कुराकानी गर्दैछौँ।
एमाले र माअाेवादी बिचकाे चुनावी तालमेल र पार्टी एकिकरणकाे विषय समेटेका छाैं । अाजकाे पाहुना हुनुहुन्छ माअाेवादी नेता शक्ति बस्नेत
नेपालमा महिला, जनजाती, दलित, मधेशी लगायतका सामाजिक आन्दोलनहरुको गति कस्तो छ ? - सामाजिक विश्लेषक बालकृष्ण माबुहाङ
''क्रमश सार्वजनिक भइरहेको स्थानीय तह प्रदेश नम्बर २ को नतिजाले के संकेत गर्छ ?''- राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य
''पूर्व पदाधिकारीहरूले कस्ताे सेवा सुबिधा पाउनुपर्छ'' ? - पूर्व प्रशासक श्रीकान्त रेग्मी
''स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो चोटी भाग लिएका मधेशका दलहरुको रणनीति कस्तो हुनु पर्ला ?''-विश्लेषक डा. हरिवंश झा
''२ नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजपा नेपालकाे तयारी कस्तो छ ?'' 'नेपाल चौतारी'मा राजपा नेपालका महासचिव केशव झा
''तीजसँग महिला अधिकारको कस्तो सम्बन्ध छ ?'' - अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी
''बाढीबाट प्रभावितहरुलाई राहत दिन सरकारले के गरिरहेको छ ?''- राहत संकलन संयोजन समितिका संयोजक केदार न्यौपाने
''डा. गोविन्द के.सी. को मागमा आम सर्वसाधारण नेपालीको भविष्य कसरी जोडिन्छ ?''- अधिवक्ता अोमप्रकाश अर्याल
अहिलेको नेपाली समाजलाई 'विवेकशील साझा पार्टी'को आवश्यकता किन छ ?''- पार्टीका सह-संयोजक उज्जवल थापा
''परिवर्तित संरचना अनुसार स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन्?'' - स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा
राष्ट्रिय अाविष्कार केन्द्रकाे अावश्यकता किन छ हामीलार्इ ?- राष्ट्रिय अाविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन
'नेपाल चौतारी'मा राजनीतिक विश्लेषक हरि राेकासंग स्थानीय तहकाे चुनावी परिणामको विश्लेषणात्मक कुराकानी गरिरहेकाछौँ।
स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनको परिणामले विभिन्न दलहरुको आगामी रणनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?''
स्थानीय तहकाे दाेश्राे चरणकाे निर्वाचनमा केन्द्रित भएर नेपाल चाैतारीमा राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरूद्ध गाैतम
''असाेज २ गतेलार्इ सारिएकाे निर्वाचनमा राजपा नेपाल सहभागी हुन्छ भन्ने अाधार के छ ?''- माअाेवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य दिनानाथ शर्मा
वर्तमान राजनीतिक गतिविधिलार्इ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले कसरी नियालिरहेकाे छ ?'' हामीले नेपाल चौतारी'मा नेकपा एमालेका सचिव याेगेश भट्टरार्इसँग कुरा गरेका छाैँ ।
''स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजपा नेपालले कहिले तयारी शुरु गर्छ ?''-राजपा नेपालका महासचिव मनिषकुमार सुमन
"अहिले सरकार परिवर्तन गर्नु अावश्यक थियाे ?''- नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एन पि साउद
''स्थानीय तहको चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले राजनीतिक वृत्तमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?''-राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल
अार्इतवार हुन गर्इरहेकाे पहिलाे चरणकाे स्थानिय निर्वाचन संग संम्वन्धित रहेर छलफल गर्न हामीसंग हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयोगका आयुक्त - इला शर्मा
''प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की माथी महाअभियोग प्रस्ताव किन ?''- नेपाल चौतारी'मा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा''प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की माथी महाअभियोग प्रस्ताव किन ?''- नेपाल चौतारी'मा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा
मधेशी मोर्चा चुनावका लागि तयार भएको हो ? आजको नेपाल चौतारीमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोसँगको कुराकनी
जनतालार्इ विजुलीकाे उज्यालाेमा राख्ने, उज्यालाे नेपालका अभियन्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिड. नयाँ वर्ष २०७४ बैशाख १ गते नेपाल चाैतारीका पाहुना ।
स्थानीय तहको चुनावको सेरोफेरो -नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल
''आफुलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा दाबी गरिरहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले अबको चुनावबाट कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?''
राजनीति के रहेछ त ?-पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल
''मधेशकाे राजनीतिले कुन माेड लेला ?'' - तमलोपाका सह महामन्त्री डा. सुरेन्द्र झा
''सप्तरी घटनाले वर्तमान राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?' - तुला नारायण साह
हामी 'नेपाल चौतारी' मा स्थानीय तहको निर्वाचन बारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माअोवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषालसँग कुराकानी गरिरहेकाछाैँ ।
मधेशी दलहरू चुनावमा जान्छन् कि जाँदैनन् ? हामी तरार्इ मध्रेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव संग कुराकानी गरिरहेका छाैँ ।
''प्रहरी संरचनाभित्र राजनीति कसरी पसेको छ ?'' - नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक रविन्द्र प्रताप शाह
स्थानीय निकायको निर्वाचन र वर्तमान राजनीतिको विषयमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे
समसामायिक राजनीतिक अवस्थाको विषयमा नेकपा माअोवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ
''मधेशवादी दलहरू निर्वाचनका लागि तयार छन् ?''-सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमन
'अबको एक वर्षमा ३ वटा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार छ ?'' हामी नेपाल चाैतारीमा प्रमुख निर्वाचन अायुक्त डा.अयाेधीप्रसाद यादवसँग छलफल गर्दैछाैं ।
लाेकमान सिंह कार्कीकाे नियुक्ति देखि बर्खास्तीसम्मकाे यात्रालाइ अाम मान्छेले कसरी लिने ? यतिबेला हामी अधिवक्ता अाेम प्रकाश अर्यालसँग नेपाल चाैतारीमा छलपफल
''सर्वोच्चको फैसलाले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?''-नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना
''अहिलेकाे राजनीतिक गतिराेध कसरी हट्छ, कहिले हट्छ ?'' - माअोवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य दिनानाथ शर्मा
'नेपाल चौतारी'मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक बिनोद लामिछानेसँग कुराकानी गरिरहेका छाैं ।
2073-09-08-Nepal Chautari 2016 Dec 23 Friday
''सीमांकन हेरफेर सहितकाे संविधान संशोधन प्रस्तावमा कसरी जुट्छ सहमति ?''- नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पाैडेलसँग कुराकानी
''संविधान संशोधन प्रस्ताव अब कसरी अगाडी बढ्छ ?''-नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम व्यवस्थापिका सँसदका साँसद डा. मिनेन्द्र रिजाल
प्रदेशकाे सीमा हेरफेर किन गरियाे ? कसका लागि गरियाे ? हामी नेपाल चौतारीमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्गसँग कुराकानी गरिरहेका छाैं ।
सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेकपा एमाले किन असहमत ? हामी 'नेपाल चौतारी'मा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेलसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।
सरकारका सय दिनका उपलब्धि के रहे ?-उर्जा मन्त्री जनादर्न शर्मा
अंगीकृत नागरिक’ को अधिकार कति ? हामीले नेपाल चौतारीमा नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरेकाछाैँ ।
2073-07-26-Nepal Chautari 2016 Nov 11 Friday
भारतका राष्ट्रपति यतिबेला नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणले नेपाललाई कस्तो उपलब्धि होला ? नेपाल चौतारीमा हामी विश्लेषक डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीसँग कुराकानी गरेकाछौं ।
2073-07-19-Nepal Chautari 2016 Nov 04 Friday
हामी नेपाल चौतारीमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा माअोवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरिरहेकाछाैँ ।
2073-07-12-Nepal Chautari 2016 Oct 28 Friday
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलार्इ महाअभियोग लगाउन दलहरुले गरेको पहलको विषयमा हामी नेपाल चौतारीमा नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँगको कुराकानी
दशै बिशेष कार्यक्रम(Nepal Chautari )
2073-06-28-Nepal Chautari 2016 Oct 14 Friday
नेपाल कुटनीतिक पहलमा सँधै किन पछि नै रहन्छ ?अहिले नेपाल चौतारीमा हामी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता महेन्द्र पाण्डे
2073-06-21-Nepal Chautari 2016 Octber 07 Friday
दशैँमा काठमाण्डुबाट घर(बाहिरी जिल्ला) जान बसको टिकट पाउनु भएन ? या यातायातसँग सम्बन्धि अरु केही समस्या छन् ? - नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसँग कुराकानी
मधेशले संविधानमा कस्ताे संशाेधन खाेजेकाे हाे ? हामीले नेपाल चौतारीमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी Hridayesh Tripathi सँग कुराकानी गरेकार्छौँ ।
2073-06-07-Nepal Chautari 2016 Sep.23 Friday
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको आवश्यकता र महत्व के हाे ? - नेकपा माअाेवादी केन्द्रका स्थायी कमिटि सदस्य शक्ति बस्नेतसँग
नागरिकको गुनासो समाधानका लागि पहल गर्न सरकारले २०६८ कार्तिकबाट 'हेलो सरकार' कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो कति प्रभावकारी छ त ?- हेलो सरकारका प्रमुख प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय
सरकारका योजना के छन् ? कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् ?-प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव'
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले ५६५ वटा स्थानीय सरकार बनाउन गृहकार्य सुरु गरेपनि यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै असहमति देखिएको छ। आयोगको प्रस्तावमा किन दलहरुको असहमति आयो त ? 'नेपाल चौतारी'मा अाज हामीसँग हुनुहुन्छ सोही आयोगका सदस्य निरज शाह । ...
2073-05-10-Nepal Chautari 2016 Aug 26 Friday
विद्यार्थीको राजनीति गर्ने उमेर कति ? 'नेपाल चाैतारी'मा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा
कहाँ पुग्यो मधेशको मुद्दा ?- सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो
नयाँ सरकारकाे काम कारबाही कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? चुनाैती के-के छन् ?-राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल
नेपालको राजनीतिमा किन हुन्छ वैदेशिक हस्तक्षेप ? हामीले एमाले नेता प्रदिप नेपालसँग छलफल गरेका छौँ ।
सरकार निर्माणको खिचातानी र राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको असमझदारीको विषयमा हामी यतिबेला नेपाल चौतारीमा नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँग कुराकानी
2073-04-07-Nepal Chautari 2016 July 22 Friday
अबकाे राजनीतिले कस्ताे माेड लिन्छ हाेला ?''हामी 'नेपाल चौतारी'मा राजनीतिक विश्लेषक हरि राेक्कासंगकाे कुराकानी
सरकार परिवर्तनकाे अावश्यकता किन ?
2073-03-24-Nepal Chautari 2016 July 08 Friday
के मंसिरमा चुनाव सम्भव छ ? 'नेपाल चौतारी'मा पूर्व प्रमूख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको सञ्जाल कहाँ कहाँ सम्म फैलिएको हुन सक्ला ? कसरी रोक्ने ?त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्व उपकुलपति, शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमासँग कुराकानी
पार्टी घोषणा सभामा केही परम्परागत शैलीहरु हटाएर नयाँपनको महसुस गराएको 'नयाँ शक्ति नेपाल'ले अबका दिनमा के गर्छ त ? नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटासँगको कुराकानी
सरकार परिवर्तनका सवालमा नेकपा एमाले भित्रै किन मत बाझिएको देखिन्छ ? हामीले यही विषयमा कुराकानी गरेका छाैं हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई ।
2073-02-28-Nepal Chautari 2016 June 10 Friday
मधेश आन्दोलन कहिले टु‌ंगिएला ? नेपाल चौतारीमा आज हामी यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ । हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।
2073-02-14-Nepal Chautari 2016 May 27 Friday
नेपाली राजनीतिमा भईरहेको उतारचढावका विच, आन्दोलनरत मधेशी जनजातीको माग सरकारले कहिले संवोधन गर्दैछ ?
यो साताको नेपाल चौतारीमा हामी कुराकानी गर्दैछौं गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत संग
2073-02-7-Nepal Chautari 2016 May 20 Friday
टाकुरामा पुग्न पहिलाे पार्इला समथर भुइँबाटै चाल्नु पर्छ । लक्ष्यमा पुग्न कयाैं कठिनार्इ र अवराेधहरू पन्छाउनु पर्छ । तिनलार्इ पार लगाउन सक्नेहरू नै चुचुराे टेक्न सफल हुन्छन् । अाजकाे कार्यक्रममा हाेमनाथ दवाडी, टुनाराज गिरी र टीका बास्ताेलाकाे जीवन भाेगार्इ समेटिएकाे छ ।
020-Maile Je Bhoge-2073-02-01
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ, अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी।
2073-01-31-Nepal Chautari 2016 May 13 Friday
उचार चढाव जिन्दगीका पाटा यिनलार्इ छिचाेल्न सक्नेहरूले नै जिन्दगीलार्इ जित्छन् । अाजकाे कार्यक्रममा बाराकी उमा, मकवानपुरका प्रदिप लामा र दागंकी सीताकुमारी चाैधरी समटिएका छन् ।
019-Maile Je Bhoge-2073-01-25
सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो, फेरि सेलायो, कारण के हो? छलफलमा हुनुहुन्छ एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
2073 - 01 - 24 - Nepal Chautari 2016 May 06 Friday
जिन्दगी अाश हाे र त्याे अाश पुरा गर्ने अाँट र विश्वास रहिराख्याे भने जीवन सफल हुन्छ । अाजकाे कार्यक्रममा अनिष खालिगं, दिनेश शर्मा र धुर्मुस सुन्तली समेटिएका छन् ।
018 - Maile Je Bhoge - 2073 - 01 - 18
नायिका करिश्मा मानन्धर किन नयाँ शक्तिमा ? नेपाल चौतारीमा हामीले करिश्मा मानन्धरसँग कुरा गरेका छौँ ।
2073 - 01 - 17 - Nepal Chautari 2016 April 29 Friday
जिन्दगीमा नसाेचेका कुरा पनि भाेग्नु पर्ने हुनसक्छ । तर जस्ताेसुकै परिस्थितिमा पनि अात्तिनु हुँदैन हरेश खानु हुँदैन । अाजकाे कार्यक्रममा रत्नप्रसाद सुवेदी, मैना नेपाली र राममायाँकाे जीवन भाेगार्इ समेटिएका छन् ।
017 - Maile Je Bhoge - 2073 - 01 - 11
कार्यक्रम नेपाल चौतारीमा सुचना तथा सञ्चरमन्त्री शेरधन राई संग सरकारको कामकारवाहीको बारेमा कुरा गर्दैछाैं ।
2073 - 01 - 10 - Nepal Chautari 2016 April 22 Friday
भुकम्प पछिको पुनर्निमाणको काम के भइरहेको छ ? नेपाल चौतारीमा आज हामी यो विषयमा कुरा गर्दैछौँ । हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय पुनर्निमाण धिकरणका प्रवक्ता राम थपलिया ।
2073 - 01 - 03 - Nepal Chautari 2016 April 15 Friday
नेपाल सरकारले खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा रोजगारीको लागि जाने नेपाली कामदारको निम्ती फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको व्यास्था लागु गरेको छ । नियमको विरोधमा म्यानपावर कम्पनीहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारको यो नियम लागु होला त ? कार्यक्रममा हामी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकृत बाबुराम खतिवडा र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव रोहन गुरुङसँग छलफल गर्दैछौँ ।
2072 - 12 - 26 - Nepal Chautari 2016 April 08 Friday
नेपाल चौतारीमा आज माआवादी पार्टी एकताको विषयमा छलफल गर्दैछौं । हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य देव गुरुङ ।
2072 - 12 - 19 - Nepal Chautari 2016 April 1st Friday
नेपाल चौतारीमा हामी प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओेलीको आसन्न चीन भ्रमणको सेरोफेरोमा परराष्ट्र मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले सँग कुराकानी गर्देछौ‌ं ।
2072 - 12 - 12 - Nepal Chautari 2016 Mar.25 Friday
नेपाल चौतारीमा वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री Ganeshman Pun गणेशमान पुनःसँग कुराकानी गर्देछौ‌ं । पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ति कहिले सहज हुन्छ ? आसन्न चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम आयत बारे के योजना बनाइएका छन् ?
2072 - 12 - 05 - Nepal Chautari 2016 Mar.18 Friday
2072 - 11 - 28 - Nepal Chautari 2016 Mar.11 Friday
नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको प्रारम्भिक परिणामले के संकेत गर्छ ? यतिबेला हामी नेपाल चौतारीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालसँग छलफल गर्दैछौं ।
2072 - 11 - 21 - Nepal Chautari 2016 Mar.04 Friday
नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनले कस्तो नेत्तृत्व चुन्ला ? नेपाल चौतारीमा हामी पत्रकार तथा विश्लेसक डा. सुरेस आचार्यसँग कुरा गर्दैछाैं ।
2072 - 11 - 14 - Nepal Chautari 2016 Feb.26 Friday
अनेरा स्ववियु नयाँ नेत्तृत्वको विषयमा छलफल
2072 - 11 - 07 - Nepal Chautari 2016 Feb.19 Friday
नेपाल चौतारीमा आज हामी नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्दैछ ? छलफल गर्दैछौंं । हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा ।